Wareysi lala yeeshay Rania Mohamed oo ka tirsan Jaamacadda Khartoum, Suudaan - AfricArXiv
Published by Johanssen Obanda & Priscilla Mensah on 4th Janaayo 2021 4th Janaayo 2021
Dr. Rania Baleela, oo ka socota Jaamacadda Khartoum, Suudaan, waa khabiir ku takhasusay cilmiga nafleyda ee ka shaqeysa horumarinta xeeladaha xakameynta cudurrada faafa..
Wareysigan waxaa lagu baarayaa shaqadii cilmi baarista ee Dr. Baleela, waaya-aragnimadeeda iyo dadaalkeeda ku aaddan wacyigelinta beesheeda si loola tacaalo noolaha sunta iyo sunta leh.
Dr. Baleela waa aqoonyahan ku takhasusay cilmiga nafleyda oo leh 21 sano oo khibrad xirfadeed ah, oo haysata shahaadada PhD-da ee cudurada faafa iyo dawooyinka kulaylaha ee LSHTM, UK. Waxay ka shaqeyneysaa sidii loo horumarin lahaa istiraatiijiyado lagu xakameynayo cudurrada faafa waxayna horseed u tahay koox si loo xakameeyo saameynta halista sunta iyo sunta ay u leedahay carruurta Suudaan. Dr. Baleela waxay hadda u adeegtaa sidii Safiirka Suudaan ee Ururka Boqortooyada ee Daawada Kuleylaha iyo Nadaafadda (RSTMH) (2020-23) waana u ololeeye xoogan oo ku saabsan Furan Furan.
Sawirkan waxaa la qaaday intii lagu gudajiray COVID -19 mowjadii ugu horeysay ee la xiray. Waxaan falanqeynayay qaab-dhismeedka 'molecular SARS-Cov2' si aan si fiican u fahmo COVID-19 waqtigaas.
Waxaan la kulmay Ms. Jo Havemann SPARC Africa 2019 ee Koonfur Afrika waxayna ii soo bandhigtay AfricArXiv sidaa darteed xubin ayaan ka noqday.
Haa waan ku galay Cilmi baaris
Dadweynaha Leishmania donovani ee Bariga Suudaan: qaabeynta ku meelgaarka ah iyo xiriirka ka dhexeeya isu gudbinta aadanaha iyo canine https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13071-014-0496-4.pdf
Ogaanshaha Leishmania spp. Dhiiga iyo DNA V.1 dx.doi.org/10.17504/protocols.io.jm2ck8e
Epidemiology molecular & phylogeography of Trypanosoma cruzi & cilmi baaris isbarbar socota oo ku saabsan Leishmania: dib u eegista & mustaqbalka.https://doi.org/10.1017/S0031182009990977
Baleela, R. (2019, Diseembar 6). Caqabadaha Helitaanka Furan marka laga eego aragtida cilmi-baare Suudaan ah. https://doi.org/10.31730/osf.io/xgpeq
Hawlaha khariidaynta ee Toddobaadka Gaaritaanka Furan ee 2010: waa sawir la cusbooneysiiyey oo ku saabsan habka Furan ee Furan uu hadda adduunka oo dhan u kobcayo https://www.researchgate.net/publication/49215769_Mapping_activities_at_the_Open_Access_Week_2010_an_updated_picture_of_the_way_Open_Access_is_presently_developing_worldwide
Genotype iyo qaabdhismeedka dadweynaha ee Bos indicus form Sudan https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20753.28009
Ogaanshaha iyo aqoonsiga molikulaha ee noocyada Brucella ee ku dhacay Geela Darfur, Suudaan. http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/SJS/article/view/1395/1480
Isbahaysiga Hp 1-1 oo leh cilladaha beerka ee bukaanada Suudaan https://www.scihub.org/AJSIR/PDF/2012/6/AJSIR-3-6-403-405.pdf
Qeybinta cudurka 'Haptoglobin Phenotypes' ee bukaanada qaba HIV / AIDS, Cagaarshowga B, Cudurka Cirrhosis iyo Xanuunka Xanuunka Joogtada ah ee Suudaan http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/SJS/article/view/79/76
Xakamaynta Periplaneta americana iyadoo la isticmaalayo budada waraaqaha Boric Acid & Neem Tree http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/SJS/article/view/108
Diiradeyda cilmi-baarista waxay ku saabsan tahay Cudurrada Tropical ee la Dayacay oo dano gaar ah laga leeyahay Leishmaniasis, hiddo-wadaha tirada badan ee duumada (malaariyada) iyo xayawaanka sunta iyo sunta leh, gaar ahaan hangarallalka iyo masaska. Marka la eego isbeddelka cimilada adduunka, daadadka iyo magaalaynta, dadku waxay ku sii dhowaanayaan inay la xiriiraan xayawaan aad u suntan sida qaar ka mid ah masaska iyo noocyada hangarallalka. Xaaladdaani waa mid aad u cad marka la eego xaaladaha Afrika iyo Aasiya. Intaas waxaa sii dheer, waxaan dareemeynaa rabitaan ah in aan baranno hangarallayaal sumaysan iyo sida loo xakameeyo iyaga oo aan keenin isu dheelitirnaan xagga bey'adeedka dalkayga hooyo ee Suudaan.
Dabagado ayaa lagu dayacay Suudaan muddo tobanaan sano ah. Sidaa darteed waxaan ku jirnaa mugdi dhan. Waxaan ku weynay in kabadan 100 caruur ah suntii sunta udiriga ahayd ee 2019 meel kaliya oo aan ku leenahay qabuuro loogu talagalay carruurta dhimatay. Tani waxay igu kaliftay inaan u yeero asxaabteyda si aan u aasaaso kooxdii ugu horreysay ee cilmi baaris sudan ka sameysa noolaha sunta iyo sunta leh. Waxaan aqoonsanahay oo kala saarnaa xayawaanka sunta leh, waxaan ka soo aruurineynaa degsiimooyinka dadka, waxaan kusii deynay deegaanadooda dabiiciga ah ama gadaal waxaanan ku barbaarinay Matxafka Taariikhda Dabiiciga ah ee Suudaan, waxaan baranaynaa sida aan u xakamayn karno, u ogaan karno sunta ay ka kooban yihiin, dadkana aan u barno sida in lala macaamilo, iwm.
Waxaan sii wadi doonnaa wixii aan ka bilownay magaaladan isla markaana waxaan ku sameyn doonnaa isla deegaannada kale ee Suudaan halkaasoo masaska iyo hangaralladu ka muujiyaan wax caadi ah.
Waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan isgaarsiin dheeri ah aan wadaagno isla caqabadaha isku mid ah. AfricArXiv waa barxad weyn oo tan loogu talagalay.
Ma haysaa wax fikir ah ama su'aalo ah oo ku saabsan Dr. Baleela? Waad uga tagi kartaa iyaga sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Tags: Soo saarista cilmi baarista AfrikafuranResearchSudan